General Fartaag oo niyad jab ka muujiyay inay ka qeybgali doonaan shirka Muqdisho ka dhacaaya (Warbixin muhiim ah) – idalenews.com
General Fartaag oo niyad jab ka muujiyay inay ka qeybgali doonaan shirka Muqdisho ka dhacaaya (Warbixin muhiim ah)
Madaxweyne ku xigeenka garabka Axmed Madoobe General C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Dowladda Somalia ay diidan tahay in Maamulka Jubbaland ay ula hadashay ka Maamul Gobaleed ahaa.
General C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa waxa uu sheegay in Dowladda Somalia, ay dhibsaneyso inay hor fadhiisato Madaxda Maamulka Jubbalan, isagoona sheegay in IGAD ay Dowladda ku amartay in Jubbaland ay shirka soo socdo ula hor fadhiisato Maamul Gobaleed ahaan, balse ay Xukuumadda laaday inay Maamul u aqoonsato Jubbaland.
Isagoo la hadlaayay Warbaahinta ayaa waxa uu yiri’’shirkii IGAD ee arimaha Jubbooyinka looga hadlaye war murtiyeedka kasoo baxay uu dhigaye in Dowladda Soomaaliya ay qaab Dowlad Gobaleed ah ula hadasho maamulka Axmed Madoobe, balse waxaa noo muuqata in Dowladda aysan marnaba raali ka aheyn inay horfadhiisato Garabka Axmed madoobe’’.
Madaxweyne ku xigeenka garabka Axmed Madoobe General Fartaag, isaga oo Eedeynaayay Xukuumadda Somalia ayaa waxa uu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu qaab shaqsi ahaan uga soo horjeedo in Maamulka Axmed Madoobe loola hadlo sidii Dowlad Gobaleed, taasina ay tahay mid Caqabad ku noqon karto inay xaadiraan Shirka Muqdisho ka dhacaayo.
Ugu dambeyntii, Maamulka KIsmaayo garabka Axmed Madoobe ayaa waxa ay doonayaan in qaladaadka ay wadaan loo raaco, iyadoona dhanka Xukuumaddu ay doonayaan in Maamulka Jubbaland loo aqoonsado inuu yahay mid Dastuurka u hogaansan isla markaana aan qabiil gaar ah kulmineynin.
Daawo:Madaxweyne Xasan oo kulan kula yeeshay Xarunta Xanaano ee Magaalada Muqdisho Guddoomiyaha Gudiga siyaasada iyo Amniga Midowga Yurub